यो कस्तो सजाए हो भगवान ? साउदीमा मृत्यु भएको छोराको शव कुर्दाकुर्दै आमाको मृत्यु !! - Silo Sangalo
Homeसमाचारयो कस्तो सजाए हो भगवान ? साउदीमा मृत्यु भएको छोराको शव कुर्दाकुर्दै आमाको मृत्यु !!
February 2, 2019 समाचार Comments Off on यो कस्तो सजाए हो भगवान ? साउदीमा मृत्यु भएको छोराको शव कुर्दाकुर्दै आमाको मृत्यु !!
छोराको शव कुर्दाकुर्दै पीरले थला परेकी आमा बितिन् । चार वर्ष टेकेकी कान्छी छोरी तनुजाले बाबाको मुहार देखेकै छैनन् । बूढा भएका पिता भाव विह्वल छन् । छोरीहरू दीपा (८), पूजा (७) र पत्नी उदास बसेका छन् ।राम्रो दामको सपना बोकेर साउदी अरब पुगेर उतै ज्यान गुमाएका का रमेश गिरीको शव आइपुग्न मात्र २२ महिना लागेको छ । रमेश बितेको खबर २२ महिनाअघि नै थाहा पाए पनि आर्थिक अभावले गर्दा समयमै उनको शव आउन सकेन ।
शव आउँछ भनेर धाउँदा-धाउँदा विदेश जान उसले लिएको ऋणजत्तिकै खर्च भइसक्यो, ६२ वर्षका पिता रामकुमार भक्कानिए, ‘सुर हराएको छ । म पनि बेसुर भएको छु । कसरी चल्छ अब ?’उनलाई छोराको खबरले थला पारेको थियो । रमेशकी आमा पिरोलिएरै गत वैशाख २७ गते दिवंगत भइन् । पत्नी मीना अझै राम्ररी बोल्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।भएको सानो भुइँघर/घडेरी राखेर झिकेको ऋणको किस्ता बुझाउन नसक्दा बैंकले लिलामीमा जाने चेतावनी दिइरहेको छ ।
शोक र दायित्वले बेसुर ससुरा-बुहारी जसोतसो रखर्च टारिरहेका छन् ।छोराको शव कुर्दाकुर्दै पीरले थला परेकी आमा बितिन् । चार वर्ष टेकेकी कान्छी छोरी तनुजाले बाबाको मुहार देखेकै छैनन् । बूढा भएका पिता भाव विह्वल छन् ।छोरीहरू दीपा (८), पूजा (७) र पत्नी उदास बसेका छन् । राम्रो दामको सपना बोकेर साउदी अरब पुगेर उतै ज्यान गुमाएका का रमेश गिरीको शव आइपुग्न मात्र २२ महिना लागेको छ ।रमेश बितेको खबर २२ महिनाअघि नै थाहा पाए पनि आर्थिक अभावले गर्दा समयमै उनको शव आउन सकेन ।
शव आउँछ भनेर धाउँदा-धाउँदा विदेश जान उसले लिएको ऋणजत्तिकै खर्च भइसक्यो, ६२ वर्षका पिता रामकुमार भक्कानिए, ‘सुर हराएको छ ।म पनि बेसुर भएको छु । कसरी चल्छ अब ?’ उनलाई छोराको खबरले थला पारेको थियो । रमेशकी आमा पिरोलिएरै गत वैशाख २७ गते दिवंगत भइन् । पत्नी मीना अझै राम्ररी बोल्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।भएको सानो भुइँघर/घडेरी राखेर झिकेको ऋणको किस्ता बुझाउन नसक्दा बैंकले लिलामीमा जाने चेतावनी दिइरहेको छ । शोक र दायित्वले बेसुर ससुरा-बुहारी जसोतसो रखर्च टारिरहेका छन् ।